Modely No: Masinina famaranana milina famaranana mafana NY Series
asa：Masinina famaranana milina famonoana mafana NY Series izay mety indrindra ho an'ireo mpanamboatra famonoana afo sy gazy oksizenina
Modely No: Masinina fanapahana birazy vita amin'ny hydraulic CBJ Series
asa: Ity milina CBJ Series hydraulic scrap bale breaker ity dia natao manokana hanapotehana ireo bales izay esorina amin'ny fiara maloto na vy vy.
Fepetra takiana amin'ny bale bale: ny haben'ny bale scrap2000mm×800mm×800mm (L × W × H), matevina ≤2,5 taonina / m³.
Model No: Masinina fanamboarana sinoa fanaraha-maso WS Series Hydraul Scrap Metal Container Shear Machine
WS Series dia karazana fitaovana vaovao ampiasaina hitsaboana vy vy. Noho ny fandrosoan'ny fiarahamonina mitohy, ny fiakaran'ny vidin'ny asa, ary ny fitomboan'ny fanirian'ireo mpandraharaha hitahiry loharanon-karena ary hampitombo ny fahombiazany, izany dia nahatonga ny fahaterahan'ny fanetezana kaontenera. Ny fanetezana fitoeram-bokatra ampiasaina amin'ny karazana fitaovana manify, firafitra vy ary fako ao an-trano.
Model No: Sinoa fanamboarana sinoa fanaraha-maso Y83 Series Hydraulika Metal Chip Briquetting Press Machine ho an'ny Metal Recycling
Y83 andiam-milina mofomamy vita amin'ny vy vita amin'ny vy no tena ampiasaina amin'ny vy, vy.
poti-varahina sy potika aliminiôma ary vidin'ny famoretana be varingarina avo lenta
hanamorana ny fanodinana sy ny fandrendrehana, indrindra aorian'ny famoretana ny vy fanariana vy.
Alligator Shear ho an'ny Mobile Digger, Copper Scrap Baler, Sheet Metal Baler, Hydraulika Baler / Aluminium afaka milina milina, Masinina vita amin'ny paosin-tsolika Baler Aluminium mitsivalana, Masinina vita amin'ny vy vovoka,